Ningakhohlwa bafundi ukuthi sitholakala nakwi-online lapho ngisho nomuntu obengalitholi leliphephandaba ezindaweni esizibhalelayo usezokwazi ukulifunda noma ngabe ukuphi.
Sitholakala kwi website ethi: www.hillcrestfever.co.za.
Le-website ye-online yenziwe ngokucophelela ngocwepheshe bezama-computer njengoba kunenkundla evuliwe lapho umphakathi uzoba yizintatheli ngokwawo, lokhu okubizwa nge-citizen journalism.
I-Citizen Journalism igunyaza umphakathi ukuthi ubhale izindaba ofisa ziphume kwiphephandaba ngale kokulinda intatheli.
Ngakho ke mfundi siyakumema ukuba ube yingxenye yawo wonke ama-online editions ethu, lokhu kuzoqinisa ubudlelwane beFEVER nomphakathi jikelele.
Awuke uzame ukuthi ungene kule-website, ubone ukuthi le-online edition esinethulela yona iniphatheleni, konke kusezandleni zenu bafundi bethu abathandekayo. Uma kukhona udaba othanda silshicilele sithumele i-sms enombolweni ethi: 073 154 4117 nendawo lapho ohlala khona ukuze sizozifikela mathupha